China Plastic Izahlulo mveliso kunye nabenzi | Khokela
Ukuba unayo iinxalenye zeplastiki kufuneka yenziwe ngomatshini okanye ebunjiweyo, singomnye wemithombo efanelekileyo kwaye efikelelekayo, kwaye singenza umsebenzi wenziwe ngokuchanekileyo.
Zeziphi izinto zeplastiki esinokuzenza kwaye zithini iipropathi zezinto eziphathekayo?
Ukuthelekisa izinto zesinyithi, izinto zeplastiki zinexabiso eliphantsi, ubunzima bokukhanya, ukumelana nokulunga kunye neenzuzo ezilungileyo zokwenza ubushushu.
1. I-PTFE: ikwabizwa ngokuba yiTeflon, ine-good resistance ukumelana nokushisa, ukuxhatshazwa kwe-corrosion, i-lubrication ephezulu, i-nonhazardous kunye ne-insulativity yombane.
2. I-PC (i-Polycarbonate): yintsimbi eyomeleleyo ye-thermoplastic, inempahla elungileyo yomatshini, ukucaca okuphezulu kunye nenkululeko yedayi kunye neempawu ezifanelekileyo zokuguga kunye nokufudumeza.
3. Inayiloni: inamandla amakhulu oomatshini, indawo yokuthambisa ephezulu, ukumelana nobushushu obuhle, ukungavumelani okuphantsi, ukumelana nokunxiba okuhle, ukufakelwa kombane okuhle Ukucima, ukungabinetyhefu, ukungabi nasongo kunye nokuma okuhle kwemozulu. Ngaphandle kokufaka i-glassfiber, amandla eqine anokunyuswa malunga namaxesha ama-2.
4. I-ABS: yeyona polima inkulu kwaye isetyenziswa kakhulu. Inokuchasana nefuthe elungileyo, ukumelana nobushushu, ukumelana nobushushu obuphantsi, ukumelana neekhemikhali kunye neepropathi zombane, kwaye kulula ukuba kwenziwe ngomatshini.
5. I-acrylic: ekwabizwa ngokuba yi-PMMA, inokusebenza elubala, uzinzo lweekhemikhali kunye nokumelana nemozulu, kulula ukuyidaya, kulula ukuyilungisa, inkangeleko entle kunye nezinye iipropathi.
Zeziphi izicelo ezizinto zeplastiki ezisetyenziselwa ikakhulu?
Ngenxa yexabiso eliphantsi kunye nobunzima bokukhanya, izinto zeplastiki zisetyenziselwa ulwakhiwo, izithuthi, ishishini, ezonyango, ezothutho, ezombane kunye nezinye izinto.
Iindawo ngomatshini Machining evela UHMW. Sinako umatshini iinxalenye entsonkothileyo zethu CNC oomatshini baseSwitzerland kwaye CNC ukujika amaziko.
Ubunzima be-Molecular High polyethylene (UHMW) yiplastiki ephezulu kakhulu, efanelekileyo iindawo umatshini Screw ezifuna ukumelana okuphezulu kakhulu ukunxiba kunye ne-abrasion. Inamandla amakhulu empembelelo yayo nayiphi na i-thermoplastic kwaye iyamelana kakhulu nezinto ezininzi ezonakalisayo. I-UHMW iyazithambisa kwaye isebenza kakuhle kumaqondo asezantsi kakhulu, kodwa iqala ukuthamba kumaqondo aphezulu obushushu. Ngokungafaniyo nenayiloni, inezinga eliphantsi kakhulu lokufunxa ukufuma, okwenza ukuba ilungele ukusetyenziswa kwiindawo ezimanzi.
I-Ultem inexabiso lokuchwetheza elingu-0.7 xa kuthelekiswa nentsimbi 12L14.
Egqithileyo Icandelo leTitanium